MDC T Inoti Zanu PF Yomutsiridza Zvakare Makamba eKushungurudzira Vanhu
Bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti Zanu PF yatanga zvakare kumutsiridza makamba ekushurudzira vanoipikisa mumatunhu ose enyika, kunyanya anoti Masvingo, Manicaland neMashonaland East.
Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nebato iri, iro rinoti mhirizhonga iyi iri kutungamirwa nechimwe chikwata chevaimbove varwiri vehondo yerusununguko.
M-D-C inoti chikwata ichi chiri kutungamirwa naVaJabulani Sibanda, pamwe nemauto, vasori nevechidiki vebato reZanu PF. Bato iri rinotiwo izvi zviri kuitirwa kutyisidzira vanhu mugadziriro yereferendamu nesarudzo idzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
MDC inoti Zanu PF ine makamba ayo muzvikoro zvinoti Museka, Potsikayi, Dindi, Chipokoteke pamwe neMungari, kuMaramba Pfungwe, mudunhu reMashonaland East.
VaSibanda vanonzi vari kushungurudzawo vanhu mudunhu reMasvingo.
Mutauriri weM-D-C, VaNelson Chamisa, vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kushushikana zvikuru nedanho ratorwa neZanu PF iri.
Studio 7 haina kukwanisa kubata VaSibanda kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa nezvemakamba aya, uye havasati vatambira gwaro reMDC riri kutaura nezvemhirizhonga iyi.